ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအား ပါးရိုက်မှု မြို့နယ်ရုံးမှ ခရိုင်ရုံးသို့ ပြောင်းလဲ စစ်ဆေးခွင့်ပြု | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ (YPI) byYangon Press International
5 Responses to ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအား ပါးရိုက်မှု မြို့နယ်ရုံးမှ ခရိုင်ရုံးသို့ ပြောင်းလဲ စစ်ဆေးခွင့်ပြု
kyi zaw on March 2, 2012 at 9:09 am
စီးပွားရေးအရအတိုင်းတာတခုထိဦးစားပေးတာတော့ ဦးစားပေးတာပေါ့။ ဒီအဆင့်ထိကိုယ်ထိလက်ရောက် နိုင်ငံထဲထိလာပြီးစော်ကားတာတော့ တမျိုးသားလုံးကိုစော်ကားတာပဲ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေ အနီးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံ တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုစော်ကားခံရလဲ ဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်ခံနေရလဲေ၇ာက်ဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ သူတို့နိုင်ငံသားနဲ့များပြဿနာတက်မိရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တရားရုံးမရောက်ခင်ရဲစခန်း မှာတင် ငရဲကျသလိုခံစားကြရတာပါ၊ ၊ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးကို ကိုယ်တိုင်လေးစားစောင့်ရှောက်မှ အခြားတိုင်းပြည်အခြားလူမျိုးတွေကလဲလေးစားကြမှာပါ၊ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတဦး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခုလိုပဲ ဂျပန်မတယောက်ကို ပါးရိုက်ကြည့်ပါလား ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ? သူတို့လူမျိုးအပေါ် စော်ကားမှုအပေါ် ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ ? ပုဇွန်တောင်ရဲစခန်းနဲ့ ပုဇွန်တောင် တရားရုံးက တရားသူကြီးမမဒေါ်နိုင်နိုင်ထွန်း တို့ရေခင်ဗျားတို့လိုလူတွေများလာတာကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေ နှိမ့်ကျလာတာ၊ ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် မစောင့်ရှောက်ချင်နေပါ တခြားလူမျိုးနဲ့ယှဉ်လာရင် ကိုယ်လူမျိုးကိုပြန်ဒုက္ခမပေးပါနဲ့၊နိုင်ငံတော်ကောင်းစားရေး တွင်တွင်ပြောနေကြတဲ့အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ နဲ့ နိုင်ငံကောင်းကျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပါတီတွေ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာလူမျိုး တွေကိုစော်ကားတဲ့ကိစ္စပါ ၊ဒီတခါရိုက်လို့ရတာနဲ့ နောက်မြန်မာပြည်ကိုလာသမျှ လူမျိုးတိုင်းဟာ မြန်မာတွေဟာပါးရိုက်လို့ရတဲ့လူမျိုးတွေလို့ ယူဆကြတော့မှာပါ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ အရှေ့တောင်အာရှကိ်ုလာလည်ရင်ထိုင်းမှာ မိန်းခလေးတွေ လှတယ် လှပတဲ့ကမ်းခြေရှိတယ် သွားလည်ကြရအောင်လို့ပြောကြပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ကိုသွားလည်ရင် မြန်မာ မိန်းခလေးတွေ ကို ပါးရိုက်လို့ ရတယ်လို့ ပြောစရာမဖြစ်အောင် ဒီကိစ္စကို ကိုယ့်မိသားစုကိုစော်ကားသလိုခံယူပြီးဝိုင်းဝန်းပေးကြပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။
han on March 2, 2012 at 11:54 am
ok . Should be peace for3year not entry to Myanmar . I hope that enough…
ဇတ်ဆ၇ာ on March 2, 2012 at 12:43 pm
အသက်နှစ်ထောင်ဂုရုကြီး=ဒကာဆိတ်ရေ မြန်မာပြည်မှာတရားရုံး ဥပဒေအသစ်တွေ ထွက်နေပြီလား?
ဒကာဆိတ်=ဟုတ်ကဲ့ ဂုရုကြီးခင်ဗျား…သမ္မာန်စာ(ဆင့်ခေါ်စာ)ကို ကြိုတင်မထုတ်ဘဲ (၁)ရက်လိုတော့မှ
ဘာအတွက် တရားရင်ဆိုင်ရန်မပြောဘဲ…တရားရုံးခေါ်ပြီးတော့ တရားလိုကို အာမခံပေးရတဲ့ ဥပဒေကို
တော့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တရားရုံးက မြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်နိုင်နိုင်ထွန်းက စတင်စမ်းသပ် အသုံးပြု
စာကလေး=ဂုရုကြီးက ခုမှ ဟိုက်ရှာလပတ်လုပ်မနေနဲ့…..ကျနော်က ဆိုက်ကားနင်းရင်းနဲ့ ခရီးသည်တွေ
ပြောပြလို့ သိပြီးတာကြာပေါ့…..ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်နိုင်နိုင်ထွန်း အမှု့ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးတာ ကောင်းလွန်းလို့တဲ့…..စီရင်ချက်တောင်မချရသေးဘူး…..ခရိုင်တရားရုံး
Phone Thar Lay on March 2, 2012 at 3:55 pm
Stupid Jusitce System
mgpouk on March 2, 2012 at 9:12 pm
စစ်အတွင်းက ၈ျပန်တွေက ဒို့ဗမာတွေကို ပါး၇ိုက်ခဲ့တယ်.မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ်.စော်ကားခဲ့ကြတယ်.ဒီအကျင့် ကခုထိပါလာတာလား။အမှုမှန်တာမှားတာထား .ဗမာမိန်းကလေးကို ဒီလိုပါး၇ိုက်တာကတော့ ဘယ်လိုမှ ခွင့်လွှတ်လို့မ၇ဘူး။ပုဇွန်တောင်၇ဲစခန်းက၇ဲတွေနဲ့ မြို့နယ်တ၇ားသူကြီးဒေါ်နိုင်နိုင်ထွန်းတို့က အမျိုးမချစ် တဲ့ မိမစစ်ဖမစစ်တွေဘဲဖြစ်၇မယ်.